सेन्ट्रल लन्डनमा साम्राज्ञी धिरज यस्तो रोमान्स ! | We Nepali
सेन्ट्रल लन्डनमा साम्राज्ञी धिरज यस्तो रोमान्स !
२०७४ माघ ५ गते ११:३९
लन्डन । पहिलोपटक उनलाई बेलायतले पत्याएन । अपिलपछि नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मीले यूके भिजा पाइन् अंग्रेजी नयां वर्षको शुरुतिर । सायद यूके आउन ०१८ साल जुरेको रहेछ । यूके आएर साम्राज्ञीले ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ फिल्मका लागि केही छायांकन गरेर नेपाल फर्किसकेकी छन् । तर, निर्माण पक्षले साम्राज्ञी आए गएको मिडियामा खासै सार्वजनिक गर्न चाहेन, किनकि पहिलोपटक भिजा अस्वीकार हुंदा युनिटले छायांकनमा सास्ती खेप्नु परयो ।
बेलायत आएर साता दिन जस्तो साम्राज्ञीले छायांकनमा बिताइन् । उनको सेन्ट्रल लन्डनमा नव नायक धिरज मगरसंग केही ‘अन स्क्रिन रोमान्स’ गरेका तस्विर शुक्रबार फिल्म युनिटले सार्वजनिक गरेको छ ।
७५ प्रतिशत फिल्म छायांकन सकिइसकेको र यूके भाग आउंदो वसन्त ऋतु (अप्रिल) तिर फेरि गर्ने योजना बनाइएको निर्देशक रेनासा बान्तवा राईले बताइन् । सन् २०१८ को मध्यतिर फिल्म रिलिज गर्ने लक्ष्य छ ।
आइ कोर फिल्मसले प्रस्तुत गरेको ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ मा साम्राज्ञी, धिरज मगर, इसान, मिरा, सरुक ताम्राकार, आकाश लगायतको अभिनय रहनेछ भने फिल्म निर्मातामा प्रभु शम्शेर जबरा र प्रज्ववल शमशेर जबरा छन् । सह निर्माता सुलेखा राई, बसन्त तामाङ र सुस्मिता जिरेल हुन् ।
रेनासाले ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ फिल्मबाटै निर्देशनमा डेब्यू गरेकी हुन् । यो फिल्म आफ्नो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भएको र धेरै आशावादी रहेको उनले बताएकी छन् ।
एक दशक अवधिमा कोरियोग्राफर भएर उनले मेरो एउटा साथी छ, प्रेम गीत, क्लासिक, मेरो लभ स्टोरी, भिसा गर्ल, सुन्तली, झोर्ले, बीर विक्रम, हाउ फन्नी जस्ता कयौं फिल्म र सय भन्दा बढि म्यूजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी छन् ।